Oonodoli boBudoda obuyinyani boBufazi obuHandsome obunamandla obuGay obuBukhulu boBudoda bowama-2022
Ixabiso eliphantsi lobomi boBuntu boDoda oSini kunye nePenis
Unodoli wethu we-torso oyindoda ubonelela ngamava asemgangathweni kunye nolwaneliseko oluphezulu kumadoda anomlutha okanye abasetyhini abanomdla. Ukunika eyona mvakalelo iyinyani ngaphandle kokubangela ingxaki kubantu abaphilayo. Zama ukuphonononga ubuni bakho ngalo nodoli, oya kukuzisa eyona orgasm ibalaseleyo. Indoda kunye oonodoli besini ababhinqileyo enokuthi isetyenziswe ngabantu bazo zonke iintlobo zesini kunye nabantu ababanjwe. Unokufunda indlela yokuzisebenzisa ngevidiyo yedoli yesini esiyindoda. Kukho i-bias enkulu engalunganga kubantu abafutshane, eya kuqhubeka ibe ngoonodoli abangamadoda.
Abasetyhini bathenga kwaye banandiphe oonodoli besondo berobhothi. Ngamanye amaxesha bazenzela ngokwabo, kwezinye iimeko benza kunye neqabane labo. Njengamadoda, abafazi basebenzisa I-DHDOLL ukuvakalisa iingcamango zabo zesini kunye nokuzonwabisa. Babelana ngesondo kunye nonodoli we-gay sex. Oonodoli abangamadoda banemiba ephambili eyahlukileyo. Phantse yonke into yokudlala ngoonodoli oyindoda inezihlunu. Abaninzi oonodoli besini besilisa unezincamathelisi ezisuswe penile ezinokusetyenziswa ngokungafaniyo. Ukongeza, iimpawu zobuso, ithoni yolusu kunye neenwele ze-pubic zodoli wesini esinexabiso eliphantsi nazo zinokwenziwa ngokwezifiso.
Oonodoli besini abangamadoda abathengiswayo benziwe ngokukodwa kwaye benzelwe ukugqibelela kwe-anatomical. Oonodoli bethu abangamadoda baneendlela ezimbini zokungena.Ezo zenziwe ngokwezifiso kakhulu kwaye unodoli we-Thesemale wesondo ekugqibeleni ukholisa ukushiya indawo encinci yokungoneliseki. Sinabathengi abaninzi ababhinqileyo abanomdla wokuthenga unodoli wesondo oyindoda wokwenyani njengeqabane. Ngegumbi elaneleyo lokwenza ngokwezifiso, nabani na unokuzenzela oonodoli besondo abangamadoda. Ziyakwazi ukuxhotyiswa ngenkqubo yokufudumala yangaphakathi ukubonelela ngokufudumala okufana nobomi. Unodoli wesondo oyindoda ovuthayo akaboneleli ngale mvakalelo. Ngaphezu koko, imodeli ye-TPE ibhetyebhetye ngakumbi. Zikwayinto ephantsi kakhulu kuneemodeli ze-silicone.
Ivenkile ye-Urdolls ibonelela ngomgangatho ophezulu woonodoli besini besini ngeendlela ezahlukeneyo kunye nezitayile. Apha unokufumana esinye isiqingatha sakho, unokukunika ukuziva ukhuselekile kubusuku obunesizungu, banokulawulwa ukuhlangabezana nazo naziphi na iimfuno zakho. Awunakulinda ukuchukumisa izihlunu ezingqindilili, ubuso bakhe obuhle buye bafunwa ngamawaka amantombazana. Khawuleza ube naye.
Isibonelelo-i-141cm i-Big Penis efana ne-Male Sex Doll i-Tpe yabantu abadala
U-Elton-I-Big Penis Half Body yaseJapan eyiNdoda eyiDoll eyabelana ngesondo
Intloko encinci ye-Bald emnyama ye-Skin Umbala we-TPE DH Doll 150cm Umgangatho ophezulu 100% Brand New Handsome Male Dolls Packaging Ubungakanani (cm) 142 * 37 * 28
Xiaozhi Head Realistic TPE DH Doll 150cm Bed Warmer Huge Penis Charming Package Ubungakanani(cm) 142*37*28 Oonodoli beSini abangamadoda
UKevin-165cm Ipenisi enkulu yamadoda i-Dolls zeSilicone iNtloko yokwakha umzimba iTpe Body Wig
Izihlunu zikaCalvin ezingokoqobo zeSini seSini unodoli oyinkwenkwe entle uSilicone 176 CM Imodeli yolusu lomzimba
I-Kent Bronze Male Doll yesiZukulwana esitsha seWolverine Silicone 176 CM Melancholy Eyes
URaelyn-Ipenisi enkulu ye-162CM yeDoll yamadoda
I-175cm ye-silicone intloko eyindoda yosana oluneeveki ezingama-90 isikhumba ngokubanzi seQita Dolls
I-Dior ePhakamileyo yoMgangatho woBunenekazi obufana noBomi boonodoli beSex Handsome 141CM Iinwele ezimfutshane eziBrown TPE umthondo 13cm 16cm ozikhethelayo
Winfred 175cm p Irontech Doll Intloko Kevin Bronze TPE Isondo Doll
I-Presley-Ipenisi enkulu ye-175CM yothando I-TPE Irontech Dolls
I-Talia-Indoda eyi-160CM yokwenene yoLuthando lwaBantu abadala i-WM Dolls
I-165cm Indoda yoDoli Pufu No. 87 Xiao Ming Qita Dolls
IHyman-175CM yaBasetyhini abaPhulula amalungu esini ngePenisi enkulu ye-TPE yamadoda eSondo
URachel-175CM oMdaka oMhle woLuthando lweWM Dolls
I-175 cm indoda unodoli Shu (i-penis 18 cm) i-Qita Dolls
U-Anthony-172cm Indoda eyi-Super Big Penis epheleleyo yeTpe Love Doll
UNick-141cm eyiNtloko yeSilicone eyiNtloko eyomeleleyo yamadoda iTpe Body Big Penis Wig
UNick -I-150cm enkulu yePenis yamadoda aPhezulu oPopayi boSondo oPheleleyo we-Silicone Universal Skin Wig
I-Koji Uemae-i-175CM i-Handsome ekhethekileyo yamaPolisa athande amaJapan amaDoda oSini aBasetyhini
I-Axian-141cm eyindoda ephezulu-yokuPhela kwePenisi enkulu epheleleyo yeTpe yoDoli
Thenga uFucking oDoli besini esiSini kwii-Urdolls
Oonodoli bethu besini abancinci benziwe ngeplatinam enyangisiweyo oonodoli besondo be-silicone or TPE iidoli ezintandathu, enengqiqo enkulu yenyani. Ziqulethe i-skeleton yentsimbi ngaphakathi ukuvumela ukuba ume okanye uthabathe indawo oyithandayo. Sidibanisa ezona mathiriyeli zikhoyo kunye nemveliso echanekileyo ukuvelisa oonodoli bothando obuphezulu. Enye yezona zinto zinomtsalane kakhulu kwaba nodoli lilungu lobudoda elichanekileyo.
Iinyani zesini ezingamanyani zesini esinamanyala sinomzimba omncinci kunye nokukhetha ukusebenza kunodoli ababhinqileyo, kodwa usengakhetha kwiinwele ezahlukeneyo, amehlo, imilo yobuso, kunye nokukhetha ithoni yolusu esikunikezelayo. Ukuba ujonge ezona zidoli zibalaseleyo zamadoda kunye nexabiso ayisiyongxaki, kuya kufuneka ke ujonge i-Urdolls, eyona venkile intsha.
A idonki yesini eyindoda uyakufanelekela ukuba ngumntu oqwengwe ngokwenene. Ulusu lwendoda enezihlunu luziva lwahluke kakhulu kulusu oluthambileyo lwabasetyhini. Kulindeleke ukuba oonodoli abangamadoda bomelele kwaye bakhaphukhaphu kunoonodoli ababhinqileyo. Oonodoli abangamadoda badla ngokuba makhulu. Omnye umahluko omkhulu yimpundu kanodoli oyindoda. Idla ngokuziva yomelele ngakumbi kunoonodoli ababhinqileyo. Ezinye izinto, ezifana nokumila kobuso, ubungakanani bezandla, kunye nomlinganiselo wesini kunye nonodoli wesini oyindoda nazo ziya kwahluka.
Oonodoli besini abangamadoda abajongeka njengabantu. Abanye abantu bakulungele ukukrazulwa ngokwenene. Iphelele kwizibini ezifuna ukongeza ulonwabo kubomi babo bobulili! Ukhuselekile abathathu ngaphandle kwabantu abaphilayo. Ulusu lwendoda olunezihlunu lwahluke kakhulu kulusu oluthambileyo lwabasetyhini. Lindela oonodoli bokwabelana ngesondo, ubukrelekrele bokwenziwa yindoda, bomelele kwaye babe khaphukhaphu kunoonodoli ababhinqileyo. Ezinye izinto, ezifana nokumila kobuso, ubungakanani besandla, kunye nokufuka a idoli yesini eyindoda imilinganiselo iya kwahluka.
I-fuck yendoda yesini enodoli nayo idla ngokuba mkhulu. ulusu oluthambileyo, inyama epheleleyo, yomelele, kwaye yomelele. Le ayingoonodoli besondo obuqhumayo. Ukusuka kwimizobo egudileyo ukuya kumatyholo amahle, ukusuka kwi-pump ukuya kwitalente, unodoli wethu wesondo oyindoda wenziwa ngesandla. Ukujongana neyantlukwano, unodoli wethu opheleleyo wesini oyindoda unamalungu esini asuswayo. Yisebenzise njenge-dildo. Oku ngokuqinisekileyo kufanelekile kumadoda athanda i-bottom-up. Omnye umahluko omkhulu yimpundu yonodoli besini esiyindoda epheleleyo. Idla ngokuziva yomelele kunodoli wasetyhini. Oonodoli besondo beRobhothi banokuvela kwixesha elizayo.